Hay'adaha Katooliga ee St. Paul iyo Minneapolis waxay xoojisaa qoysaska waxayna ka shaqeysaa inay joojiso saboolnimada iyo hoyla'aanta ee Twin Cities. Sanadlaha ah 37,000 oo qof oo aan loo eegin iimaanka, Hay'adaha Katoolikada waxay bixiyaan barnaamijyo loogu talagalay carruurta, qoysaska, iyo dadka waaweyn ee baahida ugu badan qaba. Waxaa intaa sii dheer, Xafiiska Cadaaladda Bulshada ee Cadaalada Bulshada waxay la shaqaysaa xildhibaannada dawladda, kaniisadaha katooliga, muwaadiniinta iyo ururo kale oo aan faa'iido doon ahayn si ay ugu doodaan baahida kuwa ku nool faqriga. McKnight wuxuu taageero u fidiyaa Hay'adaha Katoolikada, barnaamijka gobolka iyo barnaamijyada beelaha ah si ay u caawiyaan ururada adeegga isdhexgalka oo bixiya adeegyo ballaadhan qoysaska iyo shakhsiyaadka. Shaqooyinka taageeraya waa barnaamijyada Xarunta Adeegyada Qoyska ee Katoolikada ee Maplewood.
"Aad ayay u fiicneyd in aan leenahay qolkeena iyo inaan helno fursadaha xanaanada caruurta gabadhayda." -TATIANA
Ka hor inta aanad iman Xarunta Adeegga Qoyska, Tatiana iyo gabar 3-sano jir ah, Ta'Bria, waxay ku qaadatay wiqiga todobaadkii oo ah qolka kaniisadda, oo yar yar ama raaxo yar. Xaruntu, waxay leeyihiin qol jiif iyo musqul u gaar ah, iyo helitaanka saddex cunto oo maalintii ah, gargaar shaqo raadin, iyo daryeelka caafimaadka iyo ilkaha.
"Joogista halkan ayaa naga caawisay wax badan," ayuu yiri Tatiana. "Aad ayay u fiicneyd in aan leenahay qolkeena iyo inaan helno fursadaha xanaanada caruurta gabadhayda."
Ilaa 30 habeen oo isdaba-joog ah, qoysaska ay hayso guri la'aanta Ramsey County waxay isticmaali karaan Xarunta ilaha dhismaha ee guryaha iyo inay raadsadaan shaqo marka lagu gudajirayo guri-la'aanta ilaa guryaha degan. Kaalmada gaadiidka waxaa sidoo kale la bixiyaa si loogu taageero waalidiinta inta ay socoto hawsha, iyo waxbarashada waalidnimada iyo tababarka xirfadaha nolosha ayaa loo heli karaa dadka waaweyn, iyo sidoo kale umeerinta carruurta.
"Way adag tahay. Waa wax fiican in la ogaado in aan heysano meel waxaanan daryeeli doonaa halkaan, "ayuu yiri Anderson. Sannadkii hore, Xarunta Adeegga Qoyska waxay bixisay adeegyo ku meelgaar ah oo ammaan ah oo ku meel gaar ah iyo adeegyo ku-meel-gaar ah oo loogu talagalay in ka badan 300 oo qoys, oo qoysaska siinaya meel ay joogaan inta ay dib ugu soo noqonayaan cagahooda.